Toriteny 16 marsa 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 16 marsa 2014
Jaona 8 : 2-11
Tantara izay tsy vaovao amintsika intsony raha ity tantaran’ilay vehivavy izay nentina teo amin’i Jesoa Kristy ity. Raha araka ny fomba taloha dia rariny ny fitondran’ireto fariseo sy mpanora-dalàna ireto an’ilay vehivavy teo anatrehan’i Jesoa Kristy.
Inona ny zavatra nitranga ao amin’ity tantara ity ?
Raha nitondra ilay vehivavy janga teo amin’i Jesoa ireo mpanora-dalàna sy fariseo dia nitady izay hiampangana azy ho olo-meloka ; Jesoa kosa nefa nilaza hoe : « izay tsy nanota teo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany ». Raha nandre izay izy ireo dia nivoaka tsirairay ; ary tsy nisy tavela teo afatsy ilay vehivavy sy i Jesoa irery ihany. Izao zavatra nataon’ny fariseo izao dia taratry ny fahotana amin’ny tsy faneken’izy ireo an’i Jesoa Kristy.
Eo anatrehan’ny heloka dia I Jesoa Kristy irery ihany no hany fanafana
Raha araka izao tontolo izao anefa dia tokony novonoina izy, famonjena lehibe kosa no azony tamin’I Jesoa Kristy. Ireto fariseo ireto izay milaza ny tenany ho manam-pahaizana, nefa dia mpanota ihany ary nitsaratsara foana olona toa azy ihany. Mahameloka eo anatrehan’Andriamanitra izany toe-javatra izany. Ka ny hany fanafana eo anatrehan’ny heloka dia I Jesoa Kristy irery ihany.
Fahotana lehibe eo anatrehan’Andriamanitra ny fitsaratsarana ny namana ?
Isika rehetra izao dia tahaka io vehivavy janga io, manota nefa dia tian’Andriamanitra ho vonjena. Tsy tokony hisalasala mihitsy isika hanatona an’I Jesoa. Fombantsika mihitsy io maka fanahy an’I Jesoa io, tsy matoky ny fitondrany, nefa fantany izay mahasoa antsika. Manota, manao “blaspheme” isika indraindary amin’ny fiheverantsika antsika ho mahavita azy, amin’ny fakantsika ny toeran’Andriamanitra. Izy anefa mahafantatra ny lalana izay hieverana antsika izay hitondra fiadanana fa tsy loza. Ny fitsaratsarana olona izay mitovy amintsika dia manavanana antsika mihitsy, izany anefa dia fahotana lehibe eo anatrehan’Andriamanitra satria maka ny toerany isika amin’izany.
Tsy misy afaka manafaka antsika amin’ny fahotana afa-tsy Jesoa Kristy irery ihany ; tsy izay mety ho endrim-pahamasinana, ny asa vitan-tsika, ny toerana eo anivon’ny fiangonana no hanafaka antsika, fa ny fandraisana Azy ho Tompo sy Mpamonjy ihany. Tokony andini-tena isan’andro isika, ary hanavao ny fanolora-tenatsika ho Azy.
Inona ary no nataon’ilay vehivavy nony azony ny famonjena ? Nijanona teo amin’I Jesoa izy. Hoy ny Tompo taminy: “mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony”; ka raha tsy te ho faty intsony izany dia tsy miverina manota intsony. Ary ireo fariseo kosa dia lasa ary nanao izay efa fanaony, ary mbola izy ireo ihany no nanao izay nanombohana an’I Jesoa Kristy eo ambony hazo fijaliana.
Isika dia tsy tokony hisalasala intsony hanatona an’I Jesoa satria Izy dia efa nanome ny fanomezana lehibe dia ny nanolorany ny ainy ho fanavotana antsika.
Mpitory teny : Benjamin Radavidson Andriamparany
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 16 mars 2014